I Kiaksaresy dia mpanjaka mediana nanapaka teo anelanelanenny taona 625 sy 585 tal. J.K. I Fraortesy no rainy izay mpanjaka nodimbiasiny ary i Astiagesy zanany no nandimby azy. Nalaminy ny tafika mediana ka nanafika ny Fanjakana asiriana, nanao f ...
Ny panina miely anatinny tambazotran-tsolosaina na rafitra dia fahasimbanny singa iray mahatonga fahasimbanny singan-drafitra hafa. Izany fahasimbana izany dia mety mitranga anaty rafitra maro toa ny rafitra fitaterana herinaratra, tambazo-tsolos ...
I Kipriano avy any Kartago, izay teraka taminny taona 200, dia evekanny Fiangonana tany Afrika, maty martira taminny 14 Septambra 258 taminny fanenjahana Kristiana nataonny emperora Valeriano. Thaschus Cæcilius Cyprianus no anarany aminny teny la ...